Ny Toeran’ny Pakistaney Amin’ny Fahatapahana Ara-Diplaomatika Eo Amin’i Arabia Saodita Sy i Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Janoary 2016 4:33 GMT
Fihaonamben'ny Miozolomana Shiita manohitra ny famonoana ilay Shiita mpitondra fivavahana Nimr al-Nimr ao Arabia Saodita, ao Hyderabad, Pakistana. Sarin'i Rajput Yasir. Copyright Demotix (3/1/2016)
Notapahin'i Arabia Saodita ny fifandraisana ara-diplaomatika amin'i Iran, izay mpifaninana aminy ampolony taona taorian'ny namonoan'i Arabia Saodita olona 47 nomelohina ho nanao fampihorohoroana, ary tafiditra amin'izany ny mpitarika Shiita ambony indrindra, 56 taona, ny Sheikh Nimr al-Nimr. Nanohana ireo fihetsiketseham-panoherana anti-governemanta rangahy io tao amin'ny faritr'i Qatif ao Arabia Saodita, fonenan'olona betsaka mponina Shiita izay nitaraina hatry ny ela ho ataon'ny fianakavian'ny mpanjaka mpandala ny nentin-drazana sonita ho ambanin-javatra.
Firenena maro an'isa Shiita i Iran, ary ho setrin'ny fanatanterahana didy famonoana dia nidina an-dalamben'i Tehran ireo Iraniana mpanao fihetsiketsehana ary nanakorontana ny Ambasady Saodiana. Talohan'ireo trangan-javatra ireo dia tsy mpinamana akaiky loatra ireo firenena teôkratika roa ireo amin'ny fanohanana hery roa mpifanandrina an'ady na mpifanditra ara-politika manerana an'i Afovoany Atsinanana.
Ka inona ary no lazain'ny Pakistaney manoloana izany rehetra izany?
‘Andro hafahafa ho atrehin'i Pakistan’
Miozolomana Shiita an'arivony no nanao fihetsiketseham-panoherana milaminy nanerana an'i Pakistan tamin'ny 3 Janoary ho fanamelohana ny fampiharana ny didin'i Arabia Saodita hamono an'i Nimr al-Nimr. Tao Quetta, renivohi-paritanin'i Balochistan Pakistaney, sy tao Lahore ary Karachi, dia nitondra sora-baventy anti-Saodiana ireo mpanao fihetsiketsehana ary miantsoantso ny famonoana an'i Nimr ho “fanitsakitsahana an-ditra ny zon'olombelona.”
Ny Miozolomana Sonita no mandrafitra ny maro an'isa ara-pivavahana ao Pakistan fa betsaka, toy ny ao Arabia Saodita ihany koa, na dia vitsy an'isa aza ny Shiita, na dia manjakazaka ao Arabia Saodita aza ny sampana Islamo Sonita hiringiriny antsoina hoe Wahhabisma, fa tsy misy toy izany ao Pakistan. Voafetra amin'ny fomba henjana ny fahalalahana ara-pivavahana ao Arabia Saodita, ary managadra Shiita mpikatroka maromaro noho ny fitakiana fitovian-jò io firenena io.
Ao amin'ny tambajotra sosialy, maro ireo Pakistaney manontany tena raha homba ny iray amin'ireo mifanolana ny firenen-dry zareo, na handray ny toeran'ny mpanelanelana na tsy hitsabaka mihitsy amin'ity olana ity. Efa hatry ny ela i Pakistan no manana fifandraisana amin'i Arabia Saodita, ary tsara resaka ihany koa amin'i Iran.
Andro hafahafa manoloana an'i Pakistan: i Scylla mpitondra mofomamy Arabia Saodita sa i Charybdis mpifanolo-bodirindrina Iran
Tokony hiaraka amin'i New Zealand isika amin'ity adi-hevitra hoe Iran sa Saodita ity. Maka ny toerana lavitra indrindra amin'ity resaka ity.
Ratsy fanombohana ny 2016
Tamin'ny alatsinainy, nomelohin'i Pakistan ny fanakorontanana ny Ambasady Saodiana tao Tehran ary nilaza ny trangan-javatra ho “mampalahelo.” Tao amin'ny Biraon'ny Raharaham-Bahiny i Pakistan, no niantso isian'ny “vahaolana am-pilaminana” amin'ity raharaha ity, nefa tsy nisy mihitsy ny fanamarihana manohitra an'i Arabia Saodita tamin'ny fanatanterahana didy famonoana olona 47.
Na i Pakistan aza dia nanaisotra ny fampiatoana ny didy famonoana ho faty taorian'ny fanafihan'ny Taliban ny sekoly iray tantanin'ny tafika tao Peshawar tamin'ny Desambra 2014 izay nahafatesana olona 140, izay kilonga ny ankamaroan'izy ireo. Nanomboka teo dia mihoatra ny 300 ny olona nampiharana ny didy famonoana.
Tamin'ny 5 Janoary ny minisitry ny raharaham-bahinin'i Pakistan, Sartaj Aziz, no nilaza tao amin'ny parlemanta fa “feno ahiahy” i Pakistan amin'ny fifanenjanana misy eo amin'ny Arabia Saodita sy i Iran. Manana zoron-kevitra izy fa hiezaka i Pakistan “ho tetezana mampifandray ny misaraka” sy hanatsara ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena roa tonta.
#BoycottHajj [Manao ankivy ny fivahiniana masina]
Tamin'ny 2015, i Arabia Saodita nanatontosa farafahakeliny fanatanterahana didy famonoana miisa 157. Voapetraka ho betsaka lavitra noho izany ny tarehimarik'i Iran tamin'i 2015: tanelanelan'ny Janoary ka hatramin'ny tapaky ny volana Jolay tamin'ny herintaona, dia voarakitry ny Amnesty fa 694 ny isan'ny fanatanterahana didy famonoana (raha oharina amin'ny totalin'ny isa ofisialy milaza ho 246 ny totaliny). Araka ny Amnesty International, dia nihoaran'i Arabia Saodita ny isan'ny fampiharana didy famonoana betsaka indrindra hatramin'ny taona 1995, raha 192 ny didy famonoana notanterahanana voarakitra tamin'izany.
Ny fifanenjanana ara-diplaomatika nisy teo amin'ny roa tonta dia nitarika ny fivoahan'ny #BoycottHajj indray tao amin'ny media sosialy Pakistaney, izay nampiasaina voalohany tamin'ny Septambra 2015 raha mihoatra ny 2000 ny isan'ny olona maty noho ny fifanosehana nandritra ny fivahiniana masina fanao isan-taona tao Arabia Saodita.
Misy ireo sasantsany tao amin'ny Twitter nametra-kevitra fa ny Iraniana no nanao izay hampisongadina ny diezy, saingy tokony hotsarovana fa voasakana ny Twitter, Facebook ary ny fampitam-baovao sosialy hafa maro ao Iran.
Atao ankivy ny Hajj. Atomboka ihany koa ny fitodihana mivavaka any amin'ny Tendron-Tany Avaratra
Nanomboka ny [Ankivynyhajj] ny Miozolomana amin'n zoron-kevitra rehetra ( tsy ny Shiita ihany) ary dia an-taoniny ny Wahhabi manao fiarovan-kevitra sy manao izay mampahamenatra azy ireo.
Ny Hajj, izay iray amin'ny andry dimin'ny Islamo, dia manana ny lanjany manokana ao amin'ny Islamo. Niteraka fahatezerana tamin'olona maro ilay diezy fanaovana ankivy, ary taorian'izany no lasa nampalaza ity diezy manaraka ity tao Pakistan: #لبیک_اللھم_لبیک (Labaik Allahuma Labaik – “Indro Aho Hanompo Anao O Allah, Inty Aho” – tononina hatrany mandritra ny Hajj sy ny Umrah).
Samy te-hitsidika ny Fitoerana Masina ny Miozolomana tsirairay  Shaitan irery ihany no afa-miteny hoe Ataovy ankivy ny Hajj
“Shaitan” dia midika hoe devoly.
Ireo sioka dia tsy manohana ny Miozolomana ihany, fa ny Shiita sy ny Sonita ihany koa, ary manadino ny fahasamihafana misy eo amin-dry zareo.
Ny Hajj dia fivahiniana masina mampiseho fa firenena iray isika ary fatoran'ny fivavahana. (Andry fahadimin'ny Islamo ny Hajj)